China BA anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ Manufacture na Factory | Huaxiao
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere BA anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ, Bright Annealing igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ
Obosara: 100mm - 1500mm, ngwaahịa ndị dị warara dịka ịlele na ngwaahịa
Igwe anaghị agba nchara Bright na annealing (BA)
Na ọla kọpa alloy na-adị mfe oxidized n'oge okpomọkụ ọgwụgwọ. Iji gbochie oxidation ma melite ogo elu nke ihe a na-arụ ọrụ, ọ ga-agbanye ya na ikuku nchekwa ma ọ bụ agụụ, nke a na-akpọ mgbakwunye annealing. Ebe nchekwa a na-ejikarị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke ọla kọpa na nke alloys bụ vapo mmiri, ammonia decomposition, combustion na-ezughị ezu na akpịrị ịkpọ nkụ nke amonia, nitrogen, hydrogen akọrọ na gas na-ere ọkụ (ma ọ bụ gas ndị ọzọ na-ere ọkụ). Enwere ike ịhọrọ dị ka ụdị, ngwakọta na ihe achọrọ nke alloy.
A naghị ekpocha ọla kọpa dị ọcha na ọla kọpa na ikuku na-adịghị ike na-adịghị ike, nke kachasị ammonia nke nwere 2% H2 ma ọ bụ gas nwere 2% na 5% H2 na CO. Enwere ike ichekwa uzuoku dị ọcha site na uzuoku. Iji gbochie hydrogenosis, mgbe a na-ekpochi ọla kọpa nke nwere oxygen, ọdịnaya hydrogen na ikuku nchebe ekwesịghị ịgafe 3%, ma ọ bụ ọgwụgwọ okpomọkụ na ikuku micro-oxidizing dị ka akọwapụtara n'elu. A na-ejikwa ọla kọpa dị ọcha eme ihe maka agụụ annealing. Ọla nwere aluminom, chromium, niobium na silicon nwere ike nweta njikọta na-enwu gbaa naanị na ikuku na-ebelata oke. Usoro ọgwụgwọ (annealing ma ọ bụ quenching) nke beryllium bronze na-emekarị ka ọ bụrụ nke ammonia decomposition, mana akụkụ nke ammonia na-enweghị ike gafere 20%, ma ọ bụghị na nsogbu nsogbu afụ nwere ike ime.
Brass nwere ọdịnaya zinc dị ala nwere ike bụrụ nke ana - acha ọkụ ọkụ, mana anabatabeghị bras ọla nwere ọdịnaya karịrị 15%. Nke a bụ n'ihi na nrụrụ nrụrụ nke zinc oxide pere mpe, na ZnO nwere ike ịbe ikuku na ikuku nke nwere gas na-egbu egbu, na mgbe ọ na-ewe iwe na 450 Celsius ma ọ bụ karịa, zinc na-amalite ịtọgharị na dezincification ọla. Iji merie ọghọm a, enwere ike ịdọrọ ya n'okpuru ọnọdụ nrụgide dị elu. Ọnọdụ nchekwa eji ọla kọpa bụ gas, amonia, alụlụ mmiri, na ihe ndị yiri ya arụghị ọrụ. Ebe nchebe kwesiri ịbụ sọlfọ. Ekwesiri ka a kpochaa ihe eji arụ ọrụ tupu ọgwụgwọ ọkụ, ma ọ gaghị enwe mmanụ ma ọ bụ unyi ọzọ n'elu.
Dị iche iche 2B na BA
Efere BA (Bright Annealing), ihe dị iche na mbadamba 2B bụ na usoro ntanye ahụ dị iche, 2B na-agbakwụnye usoro ntinye na nchịkọta, na BA na-atụgharị n'okpuru gburugburu ikuku oxygen na-echekwa oxygen. Usoro ntụgharị na usoro mmecha nke ihu abụọ ahụ dịkwa iche.
A naghị eji bọọdụ BA maka eserese waya. Ọ bụrụ na a ga-adọta ya, ọ karịrị akarị na ihe mkpofu.
Ogwe 2B bu ihe nkpuchi matt, ma apughi ihu ihe ahu. Ogwe BA dị ka enyo ma nwee ike ịme ka ihe ahụ doo anya (ntakịrị mado).
Abụọ 2B na BA nwere ike ịchacha n'ime ogwe enyo 8K, mana 2B chọrọ usoro nchacha ọzọ, na BA nwere ike nweta nsonaazụ 8K site na ịtụfu ya. Dabere na ngwaahịa ikpeazụ, enwere ọdịiche dị na ma ọ bụ na-emezughị BA. Productsfọdụ ngwaahịa BA anaghị achọ polishing ma jiri ya mee ihe ozugbo.
Nke gara aga: 430 oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara
Osote: NO.4 igwe anaghị agba nchara